July 2017 - Puntland Mirror Believable Media Website
July 31, 2017 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Masuulkii maleeshiyada Al-Shabaab u qabilsanaa magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay duqayn diyaaradaha Mareykanka ay qaadeen, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. Duqaynta ayaa ka dhacday meel u dhow deegaanka Tooratoorow Sabtidii, waxaana lagu bartilmaameedsaday Cali […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s President Mohamed Abdullahi Farmajo met with army chiefs on Monday in Mogadishu. Security issues were discussed in the meeting, according to sources. President Farmajo advised the army chiefs to strengthen the security of […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Isniin ah saraakiisha ciidamada kulan kula yeeshay gudaha Muqdisho. Kulanka ayaa diirada lagu saaray arrimaha ammaanka , sida ay ilo-wareedyadu sheegeen. Madaxweyne Farmaajo ayaa saraakiisha u […]
Ugu yaraan 18 askari oo katirsan ciidamada AMISOM oo ku dhintay weerar gaadmo ah oo ka dhacay Shabeellaha Hoose
July 30, 2017 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 18 askari oo katirsan ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa ku dhintay weerar gaadmo ah oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose oo ay qaaday maleeshiyada Al-Shabaab, sida ilo-wareedyo dhanka […]
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo guddoomiye cusub doortay
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga Doorashooyinka Puntland ee (TPEC) ayaa maanta oo Axad ah guddoomiye cusub ku doortay gudaha caasimada Puntland ee Garoowe. Guddoomiyaha cusub ayaa ah Cabdiraxmaan Diiriye Qoorad oo loo yaqaan (Shuuqe). Ma jirin cid […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof ayaa ku geeriyootay toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho maanta oo Axad ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka caafimaadka iyo ammaanka ah. Qaraxa […]
At least five killed in car bomb blast in Mogadishu
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least five people were killed and 10 others wounded in car bomb blast in Mogadishu on Sunday, security and medical sources say. The blast occurred near Waberi police station along the Maka […]
Sawir-qaade Mukhtaar Nuur oo lagu xiray Muqdisho
July 29, 2017 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haayada Nabadsugida NISA ayaa xirtay sawir-qaade Mukhtaar Nuur, sida ay sheegeen ururada warbaahinta. Mukhtaar ayaa maalintii saddexaad ku xiran gudaha magaalada Muqdisho, lamana yaqaan sababta loo xiray. Mukhtaar ayaa ah sawir-qaade ku caanbaxay inuu […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xoghayihii hore ee joogtada ahaa ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya Yaxye Cali Ibraahim ayaa xafiiska ku wareejiyay xoghayaha cusub Cabdullaahi Maxamed Xasan. Yaxye ayaa dukumentiyada xafiiska ku wareejiyay ninka badali doona ee Cabdullaahi […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Former Permanent Secretary at the Somali Ministry of Interior Yahye Ali Ibrahim handed over office to new secretary Abdullahi Mohamoud Hassan. Yahye handed over the documents of the office to his successor Abdullahi […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliyaha ciidanka booliiska Puntland Janaraal Cabdulqaadir Faarax Ereg ayaa ka hadlay sababta keentay in madaxweyne ku xigeenku uu shaqada ka joojiyo. Shir saxaafadeed uu gudaha magaalada Garoowe ku qabtay maanta oo Isniin ah, [...]
Madaxweynaha Soomaaliya oo ku baaqay in gargaar deg-deg ah la gaarsiiyo dadka ay abaartu saamaysay
Baydhabo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo safar shaqo ku jooga magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ku baaqay in gargaar deg-deg ah la gaarsiiyo dadka ay abaartu saamaysay. “Dadka [...]
Bandhiga buugaagta oo ka furmay Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Khamiis ah si rasmiya u furay bandhiga buugaagta ee Garoowe. Dhowr qoraa oo Soomaali ah oo uu kamidyahay suugaan uruuriyaha Soomaaliyeed, Axmed Faarax Idaajaa [...]